Ndị Ọkụkọ Gị S ** T Stilllọ Ọrụ Na-anakwere Adị? | Martech Zone
Ndị Ọkụkọ Gị S ** T Stilllọ Ọrụ Na-anakwere Adị?
Satọde, 19 Juun 2010 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Abalị a bụ abalị dị ịtụnanya. Mụ na ụfọdụ ndị enyi m gara ilegharị anya Eric Davis mee ihe ngosi mmadu, Red Bastard, na Indy Fringe ihe nkiri. Ihe ngosi a dị ịtụnanya, na-adọta ndị na-ege ntị ma jiri nwayọ na-ebibi onye ọ bụla na-ege ntị otu otu.
N’otu oge ihe nkiri a, a na-ajụ ndị na-ege ntị ihe nrọ ha their na-esochi ajụjụ gbasara ihe ha na-eme. Red Bastard na-agwa onye ahụ ihe ọ ga-eme ka ọ pụọ na ihe ha do ma na-eme ka nzọụkwụ ha nrọ. Ka ụfọdụ na-eme ya, ndị na-ege ntị na-eti mkpu, "Bastard". Ka ndị ọzọ meriri ma zere nzọụkwụ ahụ, ndị na-ege ntị tụrụ ha aka wee kpọọ “Chicken S ** t”. Ihe si na ya pụta abụghị ihe ịtụnanya. Onye ọ bụla na-ege ntị na-atụ egwu ịnọ na njedebe nke Red Bastard na-esote elekwasị anya.
Kedu ihe nke a na ahịa? Karịa ka ị chere.
Nke a bụ nseta ihuenyo nke otu isiokwu, okwu nkịtị, isiokwu asọmpi Google Insights:
M zutere na ụlọ ọrụ na izu gara aga bụ onye ọrụ ya bụ nke a kpọmkwem isiokwu. Companylọ ọrụ a na-emefu akụ (ihe karịrị $ 50k na otu mkpọsa ụfọdụ) na mgbasa ozi ọdịnala kemgbe ọ malitere. Ọnụ ego mkpọsa ndị ahụ na-aga n'ihu na-abawanye oge na nsonaazụ ya na-ebelata. Ha na-achọzi ịzụ ahịa na ntanetị ka ha mara ma ha nwere ike ịkwụsị oruru ọbara.
Ka m nọdụrụ na palọ, ọ bụghị naanị ụjọ n'ime ụlọ ahụ ịbanye n'ime ọgụ na ntanetị, enweghị nkwenye na ntụkwasị obi. Companylọ ọrụ a abụghị naanị agọnarị, ha na-anakwere ọdịda. Ndị nọ na tebụl na-akwali ịga n'ihu (gụnyere mụ onwe m) ka a na-ele anya dị ka "Ndị Bastards". Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ ghọtara nke ọma na ihe ha na-eme anaghị arụ ọrụ, ha na-aga n'ihu na-arụrịta ụka megide ịkwaga n'ịntanetị dị ka nhọrọ.
O chetaara m ịnọ n’ọrụ ọrụ akwụkwọ akụkọ. Anọ m na-ele anya ka ụfọdụ ndị isi nwere ọgụgụ isi na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-ele eBay na Craigslist ka ha na-enyo enyo ma mezie isi ha na ihe ijuanya maka ihe kpatara ego a na-enweta.
Amaara m nke ọma ụlọ ọrụ ndị na-eme n'ihi ụjọ na iji nlezianya nabata teknụzụ ọhụụ, mana nye usoro nke ndị na-azụ ahịa iji nyocha na mgbasa ozi mmadụ dị ka ụzọ ndị bụ isi nke na-eme nnyocha ha na-esote zuo… otú i nwere ike omume na-ajụ ndị doro anya? Achọghị m ụlọ ọrụ na-anabata ụjọ - mana ọ na-eju m anya mgbe ụlọ ọrụ na-anakwere ọdịda.
Ọ bụrụ na anyị atụfuo ohere ịkwaga ụlọ ọrụ a n'ihu, enwere m ike ịnwa ịkwụ ọtọ gwa ha ihe ha bụ n'ezie ”.” Ọkụkọ S ** t! ” Red Bastard ga-adị mpako… ma ọ bụ.
Cheta na: M gbaghara ma ọ bụrụ na iwe na-egosi na asterisks doro anya… ọ bụ ihe kasị mma. Anaghị m emegide mgbasa ozi ọdịnala - mana ịghọta etu ọnọdụ dị n'ịntanetị si agbanwe mkpebi ndị ahịa bụ isi ihe iji gbanwee mmefu mgbasa ozi gị. N'okwu a, o doro anya na mmasị ndị ahịa na ntanetịime ntanetị abawanyela.
Tags: okpuindy fringeuhie uhie
RIP: Ebe nchekwa data gị niile bụ nke Matt
Mba, email anaghị anwụ anwụ
Jun 20, 2010 na 9:05 AM
Nzọụkwụ mbụ ahụ na-aka sie ike mgbe niile. O siri ike ịhapụ ịhapụ ihe a ma ama. A na-eji ihe ụfọdụ n'aka ndị mmadụ n'ọtụtụ ụdọ ígwè. Olileanya maka ụlọ ọrụ ahụ kpọtụrụ aha na ha kpebiri ịwụ elu ahụ. Akwa isiokwu.